यी हुन् २०२२ मा सबैभन्दा सफल हुने ३ राशि, सबैले डाहा गर्ने प्रगति गर्नेछन् ! – Sandes Post
यी हुन् २०२२ मा सबैभन्दा सफल हुने ३ राशि, सबैले डाहा गर्ने प्रगति गर्नेछन् !
April 15, 2022 648
विगतमा जस्तो भए पनि नयाँ वर्षमा मानिसहरुले धेरै आशा बोकेका छन् । अहिले सबैले विगतको वर्षका तीतो अनुभवहरू बिर्सेर नयाँ वर्षमा आफ्नी जीवनमा सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने सकारात्मक आशाका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छन् । कहिले नयाँ वर्ष केही राशिको लागि लागि धेरै राम्रो साबित हुने भएको छ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार राशि हरुको भाग्य चम्कनुमा ग्रहहरुको राशि परिवर्तन मुख्य मानिन्छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार वर्ष २०२२ विशेष गरी तीन राशिका लागि फलदायी रहनेछ। हेर्नुहोस् ती कुन-कुन राशिहरु हुन्….
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सन २०२२ मा धनु राशिका मानिसहरूमा धनको वर्षा हुनेछ । अर्थात् यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्नेछन् साथै धन आर्जन गर्नेछन्, व्यापार बढ्नेछ। जनवरीमा मंगलको राशि परिवर्तनले धन लाभ हुनेछ। सन २०२२ ले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्नेहरूले सफलता हासिल गर्ने छन् र विद्यार्थीहरूले परिश्रमको अनुसारको फल पाउनेछन्।
ज्योतिषीहरुको अनुसार कुम्भ राशिको लागि सन २०२२ निकै शुभ हुनेछ । यस राशिका मानिसलाई आर्थिक समस्याको समाधान हुनुको साथै स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । कुम्भ राशिका लागि जनवरीदेखि नै आर्थिक लाभ हुनेछ। जनवरीमा मंगल ग्रहको राशि परिवर्तनसँगै कुम्भ राशिलाई अधिकतम आर्थिक लाभ हुनेछ । नयाँ वर्षमा कुम्भ राशिको व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनुको साथै दाम्पत्य जीवन पनि निकै सफल रहनेछ ।
सन २०२२ ले मीन राशिलाई चारैतिरबाट सफलता मिल्नेछ । विशेष गरी मीन राशिका व्यक्तिहरूले सन २०२२ मा आर्थिक स्थितिमा सुधार हुनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू सिर्जना हुनेछन्। अप्रिल महिनामा ११ देखि १२ औँ घरमा शनिदेवको उपस्थिति रहनेछ । यस समयमा मीन राशिका मानिसहरु माथी शनिदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ जसको कारण आम्दानीको नयाँ-नयाँ स्रोत बन्नेछ । मीन राशि भएका व्यक्तिहरुको लागि यो वर्ष राम्रो रहेको छ । परिवारको माया र सहयोग वर्षभरी नै रहनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको आशीर्वाद कायम रहनेछ ।
Prevटिकटकमा बढ्यो दिदिबहिनीहरूको अगं प्रदर्शन, परिवारसँग हेर्नै नसकिने…. (भिडियोसहित)
Nextभान्जासंग फरार भनिएकी माइजु हेटौडाबाट सम्पर्कमा,भयो यस्तो खुलासा,हेर्नुहोस भिडियो
सलमान खान हेर्ने टिकट बिक्री गर्दै प्रभु पे, मूल्य २५ हजारसम्म
अमेरिकी सेना सहित भारतको लखनउबाट काठमाडौं छिर्यो सेनाको ठूलो जहाज
भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना, ४ महिने शिशुको मृत्यु